Nijera - Wikipedia
Sainam-pirenen' i Nizera
I Nijera na Nizera dia firenena ao Afrika Andrefana, tsy manana morontsiraka, manana velaran-tany mirefy 1 267 000 km². I Niamey ho renivohiny. Ny sisintanin' i Nizera dia nofaritan' ny mpanjanatany ka somary mahitsihitsy tsy manaraka soritra voajanahary. Mamaritra azy ao avaratra i Aljeria sy i Libia, avy ao atsinanana i Tsady, avy ao atsimo i Nizeria sy i Benîno, ary avy ao andrefana i Borkina Fasô sy i Malý.
Ny misy an' i Nizera ao Afrika
Mizara faritra ara-jeôgrafia telo i Nizera: ny faritra amin' ny tany efitr' i Sahara ao avaratra anjakan' ny tangorom-bohitr' i Air izay tsy ahitana zavamaniry firy, ny faritra ao amin' i Sahel izay tany somary karankaina, ary ny lohasahan' ny ony Niger ao atsimo izay hany faritra lonaka ao amin' io firenena io. Toetany mafana sy maina no manjaka ao Nizera.
Ny ankamaroan' ny mponina any dia Miozolmana fa ny Kristiana kosa dia vitsy anisa. Any amin' ny faritra atsimo no ahitana ny ankabetsahan' ny mponin' i Nizera, ao amin' ny faritra ambanivohitra indrindraindrindra. Ny fambolena no loharanon-karena voalohany any Nizera.
Sarin-tanin' i Nizera
Zanatany frantsay taloha i Nizera izay nahazo ny fahaleovan-tenany tamin' ny taona 1960.
Faritra ao Nijera
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nijera&oldid=1040813"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:18 ity pejy ity.